Izifundo ze-10 ze-Microsoft ziya kuguqula indlela ocinga ngayo IYO
"Sisoloko sigwetywa ngabahlobo bethu kwishishini lethu, kwaye ndicinga ukuba [iMicrosoft Certification] indlela eyoyiyo yokubonisa ukunyaniseka kwimisebenzi yokufaneleka, nokubonisa kwabanye abantu ukuba unako ukuthatha ukuthatha yonke into inyathelo elifunekayo. Ezinye ze-Microsoft Training & Certification zilandelayo:
Windows Azure Solutions kunye ne-Microsoft Visual Studio 2010
Ukunxibelelana nge-Microsoft Windows server 2012
Izixhobo zoLawulo lweMicrosoft Windows Server Administration
I-Microsoft System Centre ye-2012 Orchestrator SCOM
I-Microsoft SQL iseva ye-2014 Data platform
I-Microsoft Office 365 Ukuchithwa
Iseva yeMicrosoft Lync 2013
Umlawuli we-Microsoft Exchange Server kunye noKhuseleko
I-Microsoft Training Course & Certification
1. Iingxaki zeWindows® Azure ™ nge-Microsoft® Visual Studio® 2010
2. Ukuqalisa ngeVBA kwi-Excel 2010
Kutheni usebenzisa i-VBA kwi-Excel 2010?
3. I-Windows Server 2016 Training: Networking
4. I-Windows Server Administration Iziqinisekiso: I-MTA Exam 98-365
5. I-System Centre ye-2012 Orchestrator
6. I-Microsoft SQL iseva ye-2014 Data platform
7. I-Microsoft Office 365 Ukuchithwa
9. Umlawuli we-Microsoft Exchange Server kunye noKhuseleko
10. Uqeqesho lwe-Microsoft Exchange Server 2013 Training
Inkqubo yokuqeqeshwa kweMicrosoft kunye neSatifikethi yiprolog kwikhompyutha ehambisa kunye kunye ne-Microsoft evulekileyo yokunikela ngefayile kwi-Windows Azure. I-Windows Azure iboniswe yiMicrosoft njengesikhokelo sokwenza "ifu". Kule klasi, uphonononga isi sikhokelo sokusebenza kwefu kwaye uqonde indlela yokubhala, udlulise kunye neskrini izicelo ze-NET kwi-Azure.
Le klasi ijoliswe kubaphathi be-NET kunye ne-Web application encounter abaphanda izicelo ezintsha ezikhulayo okanye ukufaka izicelo ezikhoyo kwiWindows Azure
Ukuqwalasela i-computing edibeneyo kwizakhiwo zayo ezahlukeneyo nendlela i-Windows Azure ifumana ngayo kwi-computing space.
Qaphela ukuba kutheni amaqumrhu afanele asebenze izicelo kwifu eli-Azure.
Ukuqwalasela ubunjineli be-Azure.
Phanda i-SDK ye-Azure kunye nendawo yokuphucula (i-Compute and Emulators Storage).
Qaphela indlela yokwenza izicelo ze-Azure kunye nendlela ezitshintsha ngayo "ukuqhubela phambili" .INET application progress.
Bhala kwaye udlulise isicelo sewebhu se-ASP.NET (iNdima Yewebhu).
Mbonise indlela yokwenza kwaye udlulise izicelo zesiseko sokusebenza (i-Worker Role) kwi-Azure.
Phanda umthamo wokugcina u-Azure ukufaka itafile, umgca kunye ne-blob ukubeka.
Hlaziya i-SQL i-Azure, i-database yoluntu efwini.
Cinga indlela iSQL Azure ehluke ngayo kwi-Azure Storage.
Ibonisa iSisiseko esiBalulekileyo kwiZicelo (i-VBA) kwi-Excel 2010 kumxhasi we-Excel olawulayo ongengayinelijineli yesofthiwe. Eli nqaku liquka inkcazo yeelwimi yeVBA, izikhokelo zendlela efanelekileyo yokufikelela kwi-VBA kwi-Excel 2010, iphuzu ngokucaciswa kwenkcazelo yempendulo ye-Excel ye-Outcel VBA, kunye neengcebiso malunga nenkqubo nokuphanda. Kutheni usebenzisa i-VBA kwi-Excel 2010?
I-Microsoft Excel 2010 iyisisombululo esinokumangalisayo ongayisebenzisa ukulawula, ukudibanisa, nokubonisa ulwazi. Kwezinye iimeko nangona kunjalo, nangona ilungiselelo elityebileyo lezakhiwo kwi-Excel epheleleyo (u-UI), unokufuna ukufumana indlela encinci yokufuna ukudlala isabelo esingenasisigxina, sokuhlawula okanye ukudlala into ethile yokuba i-UI ayifuni kubonakala idilesi. Ngenhlanhla, izicelo ze-Ofisi ezifana ne-Excel zibonise i-Visual Basic for Applications (VBA), ulwimi lwenkqubo olunikeza amandla okunyusa ezo zicelo.
I-VBA isebenza ngokusebenzisa i-macros, indlela eyalelwe ngokufanelekileyo ebhaliweyo kwi-Visual Basic. Ukuqaphela indlela yokwenza inkqubo inokubonakala ibonakala, kodwa ngokuqhubekayo kunye nemifanekiso embalwa, umzekelo, abo bakwii nqaku, abathengi abaninzi baqwalasela ukuba ukuguqulela umlinganiselo othile we-VBA ikhowudi kwenza umsebenzi wabo unzima kwaye ubapha amandla okufumana izinto kwiOfisi ababengakholelwa. Xa uguqule i-VBA ethile, kuya kuba lula ukuthabatha ngokugqithiseleyo-ngoko ke iziphumo ezinokuqikelela apha zingenamida.
Ngokudutshulwa kwexesha elide kunika inkxaso ekusebenziseni iVBA kwi-Excel kukuzibophelela kwimisebenzi ebomvu. Ngokomzekelo, cinga ukuba unemiqulu emibini yokusebenzisa, nganye leyo inezicatshulwa ezimbalwa zee-worksheet, kwaye nganye yazo ifuna iinguqu ezimbalwa ezenziwe kuyo. Ukuqhubela phambili kungabonakala ngokuthe ngqo ngokusetyenziswa kwesicwangciso esitsha kwiseli okanye i-minding bogling njengokwenza i-gander kwezinye iimpawu zengcaciso nganye kwiphepha, ukukhetha i-graph yeyona ndlela ifanelekileyo ukubonisa ulwazi ngezo mpawu, kwaye emva ukwenza nokwenza umzobo ngendlela efanayo.
Kwimeko nayiphi na into, mhlawumbi kunokuba ungadingeki ukuba udlale loo miphumo ngokwenyama, nangaliphi na inqanaba elingapheliyo. Kunoko, unako ukutshintsha iifayile ngokusebenzisa i-VBA ukuze uqulunqe izikhokelo ezingafanelekanga kwi-Excel ukuze ulandele.
I-VBA ayilona nje ngeendlela ezingenakudlula. Ungasebenzisa kwakhona i-VBA ukufaka amakhono amatsha kunye ne-Excel (umzekelo, unokukhula kwezibalo ezintsha ukuphanda ulwazi lwakho, ngoko usebenzisa ubuchule bokucacisa kwi-Excel ukubonisa iziphumo), nokwenza iifayile ezidibanisa i-Excel kunye nezinye izicelo ze-Office, umzekelo, iMicrosoft Access 2010. Inyaniso iya kuxelwa, kuzo zonke izicelo ze-Office, i-Excel yinto esetyenziswe kakhulu njengento ethatha emva kwesigaba sokuphucula jikelele. Nangona zonke izinto ezibonakalayo ezibandakanya iirekhodi kunye nokugcinwa kweencwadi, abaphuhlisi basebenzise i-Excel kwiinkalo zeendlela ezivela kwiinkcukacha ezibonakalayo kwiprogram yokubhenca.
Kungakhathaliseki ukuba uninzi lwezizathu ezintle zokusebenzisa i-VBA kwi-Excel 2010, khumbula ukuba impendulo engcono kumcimbi ayiyi kufaka i-VBA nayiphi na indlela. Ukugqithisa ukulindela kunomlinganiselo omkhulu wezinto ngaphandle kwe-VBA, ngoko ke mhlawumbi umthengi wamandla mhlawumbi akayi kuba nolwazi nabo bonke. Ngaphambi kokuba ulungelelanise ilungiselelo le-VBA, khangela i-Help kunye ne-asethi ye-intanethi ngokupheleleyo ukuqinisekisa ukuba akukho ndlela elula.
I-Windows Server 2016 iveza iinkqubo ezintsha zokulawula iinkqubo kunye nobuchule obunciphisa ukulungiswa kwemvelo emininzi ngenkathi ihlawule iindleko kunye nokuphazamiseka kwemiyalelo yokulawula. Ezi zinto ziquka:
- IP Address Management (IPAM). Oku kunika inkqubo eyenza isityhilelo, ukulawulwa, nokukhangela indawo yedilesi ye-IP ngaphakathi kwenkqubo yombutho.
- Hyper-V Network Network. Le yile mveliso eyenza ukulungiswa (SDN) enika amandla ekusingatha imingeni yokulungelelanisa kwiinkcukacha zakho zedatha ngokuchaneka komshini (virtual virtual machine) (i-VM) iiplani ze-IP kwisistim esisisiseko somzimba esilindele kwaye sichaze, njengendlela eya kugxininiswa ngayo kwi-VM umphathi womzimba.
- Utshintsho olunzulu lwe-Hyper-V. Oku kunika uyilo ukulungelelanisa imfuneko yecandelo lokhuseleko, ukuxhoma, amanqanaba okuxhamla, kunye nenqaba yokuhlala.
- Team NIC. Ukuphuma kwipokethi yomnxibelelwano wokudibanisa (I-NIC) ukujoyina ukukwazi ukuhlanganiswa ubuncinane ababini kwiiskrini ezizimeleyo ukuqhuba njengeNIC yedwa ngaphakathi kwiWindows.
Ikholeji yokuqeqesha i-MTA ikunceda ucwangcise iMicrosoft Technology Associate Exam 98-365, kwaye uvelise ukuqonda kwezi zihloko: Ukufakwa kweseva, iiNkonzo zomSebenzi, i-Active Directory, Ukugcinwa, ukuPhathwa koSebenzi, kunye nokuSebenza koNcedisi. Eli khosi lichaphazela isicatshulwa esingabonakaliyo esivela kwiComputer Academic Course (MOAC) kule mviwo.
Umxhasi weMicrosoft Technology (MTA) yiyona nkampani ephezulu yeMicrosoft yokuhlolwa kweempawu zokuvunywa ezivumile ukufunda okubalulekileyo kulindeleke ukuba iqale ukwakha umsebenzi osebenzisa ukuqhubela phambili kweMicrosoft. Le nkqubo inika igalelo elifanelekileyo ibonisa umsebenzi ozayo kwizinto ezintsha kunye nokulindela ukubandakanyeka kwezandla ezimbalwa okanye ukulungiselela kodwa akwamkeli ekuqondeni umsebenzi.
Ukuqwalasela Ukufakwa Kweseva
Ukumamela iiNkonzo zeeNkonzo
Ukuqwalasela I-Active Directory
Ukumamela ukuSebenza koSebenzi
Inkqubo yokuqeqeshwa kweMicrosoft ne-Certification training inikezela phantsi kokufunda okubalulekileyo ukucwangcisa, ukuthumela nokugcina iMicrosoft System 2012 Orchestrator. Kule khosi, abafundi baqhelana nezinto ezahlukeneyo zeComputer Center, kwaye emva koko bafumanisa indlela i-Orchestrator 2012 eyenziwe ngayo kwaye ihanjiswe ngaphakathi kwi-Suite Centre. Ngokufanayo, le khosi iquka ukuchongwa kweenkqubo ezijoliswe ekujonganeni neemeko ezahlukeneyo, ezinokuthi zibe namava kwishishini ekuqikelelweni kwendawo. Ngaphandle kwexesha elifanelekileyo, iziganeko ziya kuba neyona nto ibalulekileyo ekujongeni i-Orchestrator 2012 kwintsebenzo enkulu kakhulu yezoshishino. Le khosi idibanisa ukufundwa kwezandla kwiindawo zokuvula, ngoko-ke iimeko ezinokusebenza zingasebenzisa isisombululo sezoshishino kwiimeko zangempela.
Inkqubo yokuqeqeshwa kweMicrosoft kunye neZatifikethi zenzelwe iingcali ze-IT ezinje ngoku ziyimfuneko ebalulekileyo yezifundo ezifunekayo ukuba zenze ntoni ne-Orchestrator 2012. Le khosi iyafana neengcali ze-IT ezifuna ukuqonda izicwangciso eziphambili zezikhokelo inokufuna iikhompyutha.
Cacisa inxalenye ye-Orchestrator 2012 kunye ne-Suite Centre ye-Suite
Nika ingxelo ye-ITIL ne-MOF
Qalisa kwaye uhlele i-Orchestrator 2012
Shintsha, uhlalutye kwaye ulinganise i-Orchestrator 2012
Ukuhlaziya i-robhotization yeencwadi kwiifom zendawo zeWindows
Yakha iincwadi zokusebenzela eziqhubela phambili usebenzisa iimeko eziqinisekileyo
Yenza iipakethe zokufaka ezinye iComputer System kunye nezinto zeMicrosoft
Yenza umgaqo wephutha ekunyamekeleni kunye nokujonga ingosi
Ukufeza izintlu zokubuyisela inhlekelele
Ukugcina uphando kunye nophando lwe-Orchestrator 2012
Inkqubo ye-MCSE ye-SQL Server 2014 Data Platform ivumela iingcali ze-IT ukuba zenzele kwaye zigcine izixhobo zesikhulu samashishini ezinkulu okanye zisetyenziselwe izicwangciso zolwazi. Le khosi iphelele kubabonisi beenkcukacha abaphethe uxanduva lokucwangcisa nokujongana nolwazi lweenkcukacha kwiimeko ezinkulu zezoshishino. Isatifikethi se-MCSE ekuphuculweni kolwazi kuya kwenza amalungu anakho ukufumana amalungiselelo nokucacisa izakhiwo zeenkcukacha, kuquka amandla, amanqaku kunye namaseva.
Amalungu akhethiweyo kule khosi aza kubhala iimbono ezihambayo kule nkqubo ye-SQL Server 2014 yokulungiselela:
Ukucacisa, ukuyila, ukuzisa, nokugcina ulwazi olusetyenziswe kwiMicrosoft
Ukuqwalasela nokuphanda izibhengezo zeenkcukacha kwiSQL Server
Ukubuza i-SQL 2014 Server
Ukulawula iimeko zeenkcukacha zeSQL Server 2014
Ukuqhuba isikhungo sokuhambisa ulwazi ngeSQL iseva 2014
Ukucacisa izisombululo zeSQL 2014 yolwazi
Inkqubo yokuqeqeshwa kweMicrosoft kunye neZatifikethi kwizinto ezikhoyo zakutsha ze-Microsoft SQL Server ziya kunceda iingcali zakha ubuchule kuzo zonke iinkalo zokujongana nesisombululo seenkcukacha zenkampani kunye neemeko zeenkcukacha eziyimpumelelo.
Iqela elibalulekileyo lababukeli kule khosi liyi-database kunye neengcaphephe zoshishino (BI) owaziyo malunga neSQL Server 2008 kwaye kufuneka bahlaziye iimpawu zabo kwi-SQL Server 2014, kwaye ukhululeke kunye nokuqhubela phambili kweenkcukacha zeMicrosoft.
I-Microsoft Office 365 yokuThuthukiswa kweeNkampani ibonisa amacebo amalungiselelo okuhlela iingcamango kunye neenkqubo zentlangano. Umncedisi wokuthumela uhlelwe kwiindawo ezinika iintlobo ezithile zeenkcukacha kwiintlobo ezithile ze-faculty inxaxheba kumbutho wakho.
Nantsi umxholo okhawulezayo wento oza kuyifumana:
Inkcazo yoHlelo lokuSebenza. Le ngcaciso inikezela ngombuso ongaqhelekanga ukuthatha i-gander kwilungiselelo kunye neemfuno ezigunyazisiweyo zokuthumela i-Office 365. Unedatha enenzuzo kwiintloko zakho ze-IT, abalawuli beprogram, kunye nokuqhuba okukhethekileyo.
Cwangcisa kwaye ulungise amacandelo. Ezi ziqendu zichaza izabelo ezithile kunye nokuzivocavoca ezifunekayo ukulungiselela nokufezekisa ngokupheleleyo i-Office 365 yakho ilungiselelo. Izigqibo zenzelwe inxalenye ebonakalayo kwisicelo apho usibamba khona phakathi kwelungiselelo lakho. Izihloko ezibhekiselele kwiSicwangciso soMhlaba inxalenye enkulu kubuya kwi-Prepare section kunye nezikhokelo zokwenza isenzo. ISicwangciso kunye nokulungiselela iziqulatho ziqulethe iziqulatho eziza kubangelelela iintlobo ezithile zeengcali ezintsha ezintsha.
Hambisa isigaba. Lo mmandla ubonisa iimpazamo zokuhambisa ibhokisi yeeklayenti zabaxhasi kwi-Ofisi ye-Office 365 ukuze uqale ukusebenzisa i-Office 365 njengento ebalulekileyo yendalo yakho.
Inkqubo yokuqeqeshwa kweMicrosoft kunye neZatifikethi iyalathisa indlela yokucacisa kunye nokulungelelanisa izwi lokusebenza kwi-Microsoft Lync Server 2013 kunye ne-Lync Online. Le khosi iya kukunika ulwazi kunye nobuchule bokuyila kunye nokujongana ne-Lync Server 2013 kwindawo, i-Lync Online efwini okanye kwintlangano edibeneyo. Okuninzi, kuya kunika iikhono ezifunwa yi-IT okanye iingcali zoqhagamshelwano ukuba zidlulisele ukulungiswa kwezwi elisekelwe kwi-Lync. Le khosi iya kukubonisa indlela yokuyila i-Lync Server 2013, kwaye iphinde inike imigaqo, iindlela ezifanelekileyo, kunye nokucamngca okuza kukunceda uhlaziye ukulungiswa kwezwi lakho. Le khosi inceda ukunyamekela ukulungiselela i-Exam 70-337.
Inkqubo yokuqeqeshwa kweMicrosoft kunye neCredit Certification kulindeleke ukuba iingcali zeengcebiso ze-IT Consultants kunye neTelementi ezingekho ngaphantsi kweenyanga ezintathu zidibanisa, zilungise, zithumele, zigcine izixazululo zokudibanisa i-interchanges (UC) ngokugxininisa ngokukodwa kwizwi elikhulu lebhizinisi kwi-intlanganiso ye-intanethi (VOIP). Ukunyamekela kufuneka kubenokukwazi ukwenza ukutshintshwa kweemfuno zoshishino ngobunjineli obukhethekileyo kunye nesicwangciso solungiselelo lwe-UC. Ukunyamekela kufuneka kufane neendlela ezibalulekileyo zeendlela zeWindows Server 2012.
Cwangcisa ilungiselelo lezwi lokusebenza ngokuguquguqukayo
Inkcazo kwaye uhlele ukulungiswa kolawulo lweLync 2013
Hlela izinto zezwi ze-Lync Server 2013
Ukuhlaziya ukulawulwa kwegama elibi
Hlela kwaye uyile i-Lync Online okanye ilungiselelo le-hybrid
Inkqubo yokuqeqeshwa kweMicrosoft kunye neZatifikethi kwi-Exchange Server Administration kunye noKhuseleko iya kufundisa malunga nokuphathwa kunye nokusekwa kweenguqulelo ze-Microsoft Exchange Server 2013 ngendlela elula. Urhwebo 2013 yinqanaba elivela kuMicrosoft onika iisombululo zebhokisi zeebhokisi, ukubhuka, kunye ne-assortment yeefayili ezihlukeneyo zokuzisa izicelo kunye nomzamo onxibelelanisiweyo. Amalungu aya kufumana idatha ebanzi ekumiseni, ekuhleleni nasekujongeni iziseko ze-MS Exchange, umzekelo, iibhokisi zeposi, umthengi, kunye nokuthunyelwa komyalezo. Ukhuseleko lwe-Symantec Mail lwe-MS Exchange ludibanisa iSyantec Antivirus ukunika isiqinisekiso se-imeyli ngokumelene ne-spyware, ubuqhetseba, izifo, kunye nokunye ukuhlaselwa ngomsindo ngelixa ugunyazisa izicwangciso zokuhlunga okuqukethwe kwi-Exchange Server. Ukhuseleko lwe-Symantec longeza umnqongo we-Symantec Protection Suite enika izixhobo zokhuselo ngokumisa i-imeyile eneengozi ngaphakathi kwaye isebenza njengomgca wokuqala wokukhusela kwiingozi xa kukho ukuvela kwimeko yokudumala kunye neposi. I-Symantec Security Impact i-Symantec AntiSpam, elawulwa yi-Brightmail innovation, ukuphazamisa ubuninzi be-spam ezayo.
Ukuhlanganiswa okubalulekileyo kwabantu kule khosi iIknoloji yezoLwazi ngezoLwazi (IT) ezizama ukuzama ukumazisa abaphathi. Abanye abantu abanokuthatha le khosi baquka ii-generalists ze-IT kwaye bancede iingcali zengingqi yomsebenzi ezifuna ukufumana nge-Exchange Server 2013. Iinhloko eziza kule khosi zixhomekeke ekubeni zingabi ngaphantsi kweminyaka eyi-3 yamava asebenza kwiinkalo ze-IT-ngokuqhelekileyo kwimimandla yenkqubo yentlangano, indawo yendawo yokuncedisa, okanye inkqubo yentlangano. Akulindelekanga ukuba ziya kuthatha inxaxheba kwiifom ze-Exchange Server ezidlulileyo Ukuhlanganiswa kwabancedisi abantu kule khosi beengcali ezinethemba lokuthatha uvavanyo lwe-70-341A: i-Microsoft Exchange Server 2013, iCore Solutions Solutions, njenge-standalone, okanye nje umbandela wezinto ezifunekayo kwi-MCSE: Isiqinisekiso se-Microsoft Exchange Server 2013 siya kuthatha le khosi njengento yokucwangcisa.
Inkqubo yokuqeqeshwa kweMicrosoft kunye neZatifikethi iya kunika ukufunda nokukwazi ukulungiselela, ukuthumela, ukujongana, ukukhuseleka, nokuqinisa iMicrosoft Exchange Server 2013. Le khosi iya kukubonisa indlela yokulungiselela iString Server 2013 kwaye ikunikeze idatha ofuna ukuyifakraza, uqhubeke, kwaye uphando nge-Exchange Server 2013. Le khosi iya kunika imithetho, iindlela ezintle kunye nokucinga okuza kukunceda ukwandise ukusetyenziswa nokunciphisa iimpazamo kunye neengozi zokhuseleko kwi-Exchange Server 2013.
Thumela kwaye uphathe i-Exchange Server 2013.
Hlela kwaye uyile i-part ye server yeposi.
Ukujongana namanqaku abaxhamliweyo, iindlela zeedilesi, kunye neerekhodi zedatha kwi-Exchange Server 2013.
Cwangcisa kwaye wenze i-server ye-Client Access inxenye kwi-Exchange Server 2013.
Khusela ngokukhuselekileyo kwaye uyilobe i-Microsoft Outlook Web App kwaye usebenzise ulwazi oluninzi ngokusebenzisa i-Client Access
Qonda kwaye uhlolisise iinkonzo ezifikelelekayo kwi-Client Access kwi-Exchange Sever 2013.
Hlalani ukulungelelanisa ukulungelelaniswa kweentlekele, yenza ukuqiniswa kunye nokuhlaziya kwakhona kwi-Exchange Server 2013.
Hlela kunye nokuthutha umyalezo wesithuthi kwi-Exchange Server 2013.
Hlela iindlela zokuphepha zemiyalezo, uhlalutye izixazululo ze-antivirus, kwaye wenze ulungelelaniso lwe-spam.
Hlela isivumelwano kunye ne-Safe Server 2013.
Isikrini, qhubeka, kwaye uphando nge-Exchange Server 2013 imo.
Isihlwele esibalulekileyo kule khosi iIknoloji yezoLwazi (IT) iingcali ezifuna ukuzama ukumazisa iinqununu. Abanye abantu abanokuthatha le khosi baquka ii-generalists ze-IT kwaye bancede iingcali zengingqi yomsebenzi ezifuna ukufumana nge-Exchange Server 2013. Abalawuli abaza kwikhosi bayafuneka ukuba bangabikho ngaphantsi kweminyaka eyi-3 yamava abasebenza kwi-IT kwinkalo-ngokuqhelekileyo kwimimandla yenkqubo yentlangano, indawo yendawo yokuncedisa, okanye inkqubo yentlangano. Akulindelekanga ukuba ziya kubandakanywa neenguqulelo zeSchange Server zangaphambili.
Iqela elixhasayo lababukeli beli khosi ziingcali ezinethemba lokuthatha uvavanyo lwe-70-341A: I-Microsoft Exchange Server 2013, i-Core Solutions, njenge-standalone, okanye njengecandelo lemfuneko ebalulekileyo kwi-MCSE: Isiqinisekiso se-Microsoft Exchange Server 2013 siya uthathe le khosi njengento yokucwangcisa.